Home News Ruux shacab ahaa oo lagu dilay Bartamaha suuqa-Kaaraan
Ruux shacab ahaa oo lagu dilay Bartamaha suuqa-Kaaraan
Sida ay sheegayaan wararka aynu ka heleeyn Degmada kaaraan ee Gobolka Banaadir waxaa halkaasi lagu dilay Ruux shacab ahaa.
Runtii shacabka gobolka Banadir ma yaqannaan goor ay ammaan yihiin oo ay suuqa biyo u doonan karaan, dowladdana waxay malaayiin doolar ku bixineysaa inay doorasho xaaraan ah sameyso, inay dumiso maamullada dawolad goboleedyada iyo inay ooyin la jilba jabsato marka caasimada kale sida Nayrobi iyo Addis abeba ay wax ka dhacaan.
Rutii cidna ma garaneyso waxa shacbiga Somaliyeed ay u marayaan dhibaatadan oo aan ka ahayn, iyagoo u baahan inay rabbi u noqdaan, isla markaana iska xorreeyaan cid kasta oo dhibaato ku haysa sida dowladda oo mas’uuliyadeedii gabtay iyo koxaha naxariisa laawayaasha ah, waayo waxay taladoodu gacanta u gashay tuugo ku takri fashaa.
Bal qiyaas akhristow haddii ruuxaan dulmiga loo dilay uu waalidkaa, walaalkaa, wiilkaaga, xaaskaaga ama guud ahaan ehelkaaga ahaan lahaa sow qoriga ma qaadateen si loo suuliyo ammaandaradaan ay dowladda uga mas’uul tahay inaysan marnaba isku howlin iany wax ka qabato.
Koox Bastoolado ku hubeeysan ayaa ruuxaani ku dhuftay dhowr xabadood sida ay inoo sheegeen dadka deegaanka, kooxdii dilka geeysatay ayaa goobta ka baxsatay.
Ciidamada amniga ayaa goobta gaaray waxaa ayna kasoo qaadeen meeydka marxuumka tan oo laftigeeda shakigeeda leh. Waayo ciidanka waligood ma soo helin qof dilay ruux shacab ah, meydakana sabab ay u qaataan ma jirto haddii aysan qarineyn raad ka muuqda dilka.